Alternatives amin'ny Yify ~ Alternatives tsara indrindra amin'ny YTS amin'ny 2022 | la-manette.com
16 février 2021 feh JEAN-MICHEL CAPPIN
Amin'ity lahatsoratra ity, izahay ato amin'ny iLounge dia hizara ny safidy tsara indrindra amin'ny Yify amin'ny 2021. Holazainay aminao ny antony nanakanana ny tranokala YTS na Yify ary inona no safidy tsara indrindra.
Ny tranokala Torrent dia voazaha maso foana avy amin'ny fampiharana ny lalàna noho ny lazany izay ahafahan'ny mpampiasa misintona votoaty misy copyright.
Izany no antony mahatonga ny sasany amin'ireo tranonkala torrent tsara indrindra toa ny The Pirate Bay, Extratorrent ary Kickass Voasakana ny Torrents any amin'ny firenena maromaro.
Tranonkala torrent iray hafa niatrika ny fiantraikan'ny lalàna ny sarimihetsika Yify na YTS. Ny sarimihetsika Yify dia iray amin'ireo tranonkala torrent tsara indrindra satria heverina ho iray amin'ireo loharano malaza indrindra ao amin'ny vondrom-piarahamonina fifampizarana namana.
mifandraika : 100% miasa ExtraTorrents proxy hanakanana Extratorrents].
Raha mipetraka any amin'ny firenena tsy misy Yify na YTS ianao, ity misy lisitry ny safidy YTS azonao ampiasaina tsy tapaka hisintonana rakitra torrent. Ireo safidy Yify ireo koa dia manana safidy marobe amin'ny rakitra falehan-driaka mba hisintona, ary ny ankamaroan'ny tranonkala hafa voalaza eto dia miasa any amin'ny ankamaroan'ny firenena.
Alternatives Yify tsara indrindra 2021
1. Ny Pirate Bay - Alternative tsara indrindra amin'ny sarimihetsika Yify
Ny Pirate Bay dia iray amin'ireo tranonkala torrent malaza indrindra eran-tany. Vao haingana izahay no nahafantatra fa ny The Pirate Bay dia niverina an-tserasera ary azo idirana amin'ny alàlan'ny sehatra niaviany - thepiratebay.org.
TPB dia tranonkala torrent somary miavaka amin'ireo mpankafy torrent noho ny karazana torrent maro azonao alaina eto sy ny interface tsara mpampiasa azy. Amin'ny fampiasana ity safidy YTS ity dia azonao atao misintona tondra-drano de sarimihetsika, logiciel, andiana fahitalavitra, mozika sy ny maro hafa.
mifandraika : Lisitra proxy KickAss [100% hafa miasa amin'ny KickAss Torrents]
2. 1337x - Tranonkala Clone Sarimihetsika Yify tsara indrindra
Raha te-hisintona torrents ho an'ny sarimihetsika, fampiharana ary rindrambaiko mampiasa torrent sy Yify sarimihetsika tsy mandeha ianao, 1337x no safidy tsara indrindra ho anao.
Ny tranokala torrent dia manana fiantsoana hita maso tsara satria ny zava-drehetra manomboka amin'ny pejin'ny fanondro hatrany amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana dia mivoatra tsara. Ny 1337x dia natao ho an'ny mpihaino be dia be amin'ny mpankafy torrent noho ny fanasokajiana torrents.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fampiasana ny findainao ho webcam USB
Azonao atao ny mijery sarimihetsika, fahitalavitra, lalao, mozika, fampiharana, sarimiaina, sy ny maro hafa. Ankoatr'izay, misy faritra malaza amin'ity safidy torrent YTS ity izay mampiasa ny torrent malaza sy malaza rehetra nefa tsy mila mandalo olana amin'ny fitadiavana azy ireo amin'ny tanana.
3. Kickass Torrents - Alternative YTS malaza
Tsy mila ampidirina ny Kickass Torrents satria malaza be amin'ny Internet ity tranokala torrent ity. Mipoitra ho iray amin'ireo tranokala torrent tsara indrindra tamin'ny 2021, ny Kickass Torrent dia afaka miasa ho safidy YTS tonga lafatra ho an'ireo izay tsy afaka miditra amin'ny YTS noho ny antony rehetra.
Raha nikatona ela be talohan'izay ny tranokala Kickass Torrent tany am-boalohany, dia tranonkala fitaratra maromaro no niseho tamin'ny Internet. Ny sehatra fitaratra mazàna dia manana ny interface sy ny fametrahana safidy mitovy.
Azonao atao ny mahita ny katalaogin'ny torrent, ny torrent malaza indrindra ary ny fizarana Top torrents eo an-tampony. Ireo dia tonga miaraka amin'ny rahona tag izay milaza aminao momba ny fikarohana mahazatra ao amin'ny tranokala.
4. ExtraTorrent - YTS.mx Alternative ho an'izay rehetra takian'ny torrent
Extratorrent dia iray amin'ireo tranonkala torrent malaza indrindra hatramin'ny nikatonany tamin'ny taona 2017 toy ny tranokala torrent hafa. Hatramin'ny niatrehan'ny Extratorrent ny tanjaky ny manampahefana sy ny sampan-draharahan'ny fampiharana ny lalàna, dia nisy tranonkala fitaratra Extratorrent maromaro niseho tokoa.
Azonao atao koa ny mampiasa ireo tranonkala taratasy fanomezam-pahefana Extratorrent raha tsy hita ao amin'ny faritra misy anao ny tranokala torrent. Extratorrent dia mifandray amin'ny mpihaino marobe amin'ny fanomezana rakitra torrent be dia be ary noho izany dia mety misy safidy YTS azonao ampiasaina.
5. rarbg - Ny safidy tonga lafatra amin'ny sarimihetsika Yify
Na dia feno doka sy pop-up aza izy io, rarbg dia nitazona ny toerany ho iray amin'ireo tranonkala torrent malaza indrindra eran-tany. Raha toa ka tsy mety aminao ny sarimihetsika Yify noho ny antony iray, dia afaka mandeha any amin'ny Rarbg foana ianao hisintona torrents. Manana fanangonana torrent salama izy io miaraka amin'ny mpamboly ampy.
Rarbg dia malaza amin'ireo izay miandrandra ny fampidinana sarimihetsika amin'ny alàlan'ny tranokala torrent satria ity safidy YTS ity dia manolotra tranofiara amin'ny sarimihetsika ankehitriny ankoatra ny faritra voatokana hisintonana sarimihetsika amin'ny alàlan'ny torrents.
Vakio ihany koa: Ahoana no ahafantaranao raha misy olona mampiasa Wi-Fi anao?
6. Lime Torrents - Tranonkala torrent toy ny sarimihetsika Yify
Lime Torrents dia niseho imbetsaka tao amin'ny lisitry ny tranokala torrent tsara indrindra. Ny tranokala torrent dia nahazo valiny tsara avy amin'ny mpampiasa satria afaka mahita rakitra torrent amin'ity tranokala ity ianao.
Lime Torrent dia iray amin'ireo safidy YTS tsara indrindra azonao ampiasaina hisintonana rakitra torrent raha tsy mandeha ny sarimihetsika Yify.
Havaozina tsy tapaka ny tranokalan'i Lime Torrent, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo toerana tena tian'ny mpankafy torrent. Ny rakitra torrent nampiantranoana eto dia manana mpanambola sy leecher be dia be.
mifandraika : Tranonkala fikarohana torrent 8 tsara indrindra hahitana torrent
7. Zooqle - Alternative Yify ankafiziny
Zooqle no tranokala torrent farany hita ao amin'ny lisitry ny safidy Yify tsara indrindra. Anarana vaovao vaovao ao amin'ny niche torrent manokana izy io izay manamafy ny toerany amin'ny fampitomboana ny isan'ny rakitra torrent azo alaina ho an'ny mpampiasa.
Zooqle koa dia manana sokajy isan-karazany ao anatin'izany ny fampiharana, lalao video, sarimihetsika, mozika, ary rindrambaiko azonao ampiasaina hahazoana torrents mora. Zooqle dia manana fizarana natokana ho an'ny torrent be indrindra, izay faritra manitikitika izay tiako hojerena amin'ny tranokala torrent hafa koa.
8. EZTV - Fisoloana folo taona ho an'ny YTS
Ny EZTV dia novolavolaina tamin'ny taona 2005 ary taorian'ny fiainana nahafinaritra 10 taona dia nakatona tamin'ny 2015 izy io taorian'ny nalain'ny "EZCLOUD LIMITED" ny mpizara azy. Taloha, niatrika olana maro momba ny fitoniana ny EZTV ary tsy niasa nandritra ny fotoana elaela.
Soa ihany fa efa miasa izao io safidy Yify io ary azon'ny mpampiasa atao ny misintona rakitra torrent. Ny iray amin'ireo lafy ratsiny amin'ny EZTV dia feno doka mety hanelingelina anao.
mifandraika : Lisitra Proxy PirateBay [tranonkala proxy TPB 100% | tranokala fitaratra TPB].
YTS 2021 Alternatives: Mampiasà tranokala torrent proxy
Raha tsy mandeha ao amin'ny faritra misy anao ny sarimihetsika Yify ary nosakanan'ny ISP-nao ny fidirana amin'ireo tranonkala torrent voalaza etsy ambony, dia eto ireo proxy sy tranokala fitaratra ireo hanampy. Azonao atao ny mampiasa ireo tranokala proxy ireo ho solon'ny Yify raha ilaina izany.
Vakio ihany koa: Afaka manara-maso finday fototra ve ianao?
Alternatives amin'ny Yify Movies: FAQs
Inona no atao hoe Yify?
Yify Torrents na YTS (Yify Torrents Solutions) dia tranonkala torrent malaza izay manome karazana rakitra torrent sy rohy magnetika.
Inona no nitranga tamin'i Yify?
Voatery nakatona ny tranokala Yify tany am-boalohany rehefa voampanga ho nizara votoaty tsy ara-dalàna ny tompony. Nanomboka teo, maro ireo safidy Yify sy tranokala fitaratra no nipoitra niaraka tamin'ny interface mitovy mba hanompoana ireo mpampiasa.
Mbola miasa ve i Yify?
Ny tranokala Yify tany am-boalohany dia nakatona tamin'ny taona 2015, saingy mbola afaka miditra amin'ny tranokala fitaratra Yify sy ny safidy YTS voalaza etsy ambony ianao.
Nahoana no tsy mandeha ny sarimihetsika Yify?
Raha tsy mandeha aminao ny sarimihetsika Yify dia mety ho nosakanan'ny ISP-nao ilay tranokala. Amin'ity tranga ity, azonao atao ny mampiasa safidy sarimihetsika Yify na tranokala torrent hafa mba hisintonana sarimihetsika amin'ny alàlan'ny torrent.
Disclaimer: Ny tranokala torrent aseho eto ambany dia natao ho fampahafantarana fotsiny. Tsy mamporisika ny fampiasàna azy ireo izahay hisintona fitaovana misy zon'ny mpamorona.
10 endri-javatra tsara indrindra amin'ny Ubuntu 15.10 Wily Werewolf